ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၅-၁-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၅-၁-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဝင်ဖို့ တိုက်တွန်း click
- လူနည်းစုအရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှုတ်ဆိတ်မနေသင့် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ကချင်ပြည်နယ်အရေး စိုးရိမ်ကြောင်း ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန် ပြောကြား click
- အစိုးရအနေဖြင့် ကေအိုင်အေဒေသအား အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကို ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် click
- ကေအိုင်အိုက ဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရသုံ့ပန်းတွေကို ပြန်လည်လွှဲအပ်လို click
- မြန်မာစစ်သုံ့ပန်း ၃၀ KIA လွှဲပြောင်းမည် click
- မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်က ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ပေးမယ် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ရန်ကုန် ရောက်ရှိ click
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်မှု ပြည်သူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက် click
- ၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးတင်ဦး မိန့်ခွန်း (ရုပ်သံ) click
- ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်၏ ၂၀၁၂ တက္ကသုိုလ်ပညာရေးဥပဒေ ဝေဖန်စာတမ်း (၃) click
- ဒုက္ခရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအား ဆရာတော် ဦးဇောတိက သွားရောက် အကူအညီပေး click
- သတ္တုတွင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် လက်ပံတောင်းတောင် (ဆောင်းပါး) click
- ကျောက်ဖြူခရီး ဒိုင်ယာရီ (ဆောင်းပါး) click
- သာပေါင်း စက္ကူစက်ရုံကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး click
- ဘယ်အစိုးရတက်တက် မသာပဲချနေမည့် ကျော်သူ click
- ဘယ်အစုိုးရ တက်တက်၊ ကျော်သူရှိမှ စိတ်ချရမယ် … (ကာတွန်း) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:20 PM
KIA ဟာ မြစ်စုံစီမံကိန်းမှာ အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေ မသိလိုက်ရပဲ အစိုးရနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဖွင့်ချပြခဲ့တာလဲ KIA ပဲ ။ ကိုမြန်မာနိုင်ငံသား ညီအကိုတိုင်းရင်းတွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူး တစုံတရာမပေးတဲ့ တရုတ်နဲ့ စစ်အစိုးရလုပ်တဲ့ စီးပွားရေးတွေ ရဲ့ ကြားမှာ KIA က အရှုပ်တခုလိုဖြစ်နေတော့ KIA ကို အပြတ်ရှင်ပြစ်ချင်နေတော့တာပဲ။ KIA ရှိတော့ ကချင်ပြည်က မြန်မာပိုင်သယံဇာတတွေကို တရုတ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လွတ်လပ်စွား ခိုးခွင့်မရတော့သဖြင့် KIA ကို အပြတ်ရှုင်းချင်နေချင်းသာဖြစ်ပါတယ် လုပ်သားပြည်သူများ ကျောင်းသားများ ရဟန်းများ ခင်ဗျ။ KIA ဟာ ဗမာလူမျိုးတို့နဲ့ တသွေးတသားထဲရှိတယ် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုတွေနဲ့ တ၀န်းထဲကကျလာတဲ့ သွေးချင်းတွေလို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်။ယခုထိုးစစ်ဟာ အဓိကျြမန်မာပြည်ကြီးကို တရုတ်ကိုရောင်းစားပြီး ကို့မိသားစု ကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်နေကျတဲ့ အာဏာရူး ဥစရူး စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ မတရား ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့
စစ်အစိုးရ အာဏာ ပြန်လဲထူထောင်လိုသော လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကိုများအားလုံး ညီညွတ်ကျပါ စစ်အာဏာရှင်ဟာ တိုင်းပြည် ချောက်ထဲမရောက်ရောက်အောင် ဆွဲချနေပါတယ် ကို့မိသားစု ကြီးပွားရေးကလွဲပြီး ဘုရားလဲမကြောက် တရားလဲမကြောက်တဲ့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်ပြီး အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဗမာပြည်သူလူထုကို ဖျက်စီး ပြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် သွေးစည်းကျပါ ညီအကိုတို့။
black burma ရေကြည့်လဲပြောဦး ဗမာတွေကို စော်ကားပြီး အခုမှ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ စည်းရုံးဖို့ ကြီုး စားမနေနဲ့ နင်တို့ ဗမာမုန်းတီးရေး အမြဲတမ်း ပြောလာတာ
ct ပြောတာအရမ်းမှန်တယ် ကေအိုင်အျေဖက်ဆီးလို့ပျကီးသွားတဲ့လမ်းတံတားနဲ့အခြားအရာတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့သူတို့အတင်းဒမြတိုက်ယူထားတဲ့
ct ရေကြည့်လဲပြောဦး ဗမာတွေ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို စော်ကားပြီး အခုမှ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ စည်းရုံးဖို့ ကြီုး စားမနေနဲ့ နင်တို့ဗမာတွေ မုန်းတီးရေးစကား မပြောပဲ အမြဲတမ်း ဖင်ပဲချလာတာ
Black Burma ပြောတာအရမ်းမှန်တယ် သတ်မတော်က ဖျက်ဆီးလို့ပျကီးသွားတဲ့လမ်းတံတား၊ လူသူလက်နက်နဲ့ အခြားအရာတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ သူတို့အတင်းဒမြတိုက်ယူထားတဲ့
ဆက်ကြေးငွေတွေပေါင်းလိုက်ရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဆင်းရဲသားတွေကိုတစ်နေ့ငွေ ၁၀၀၀၀၀၀၀ အနည်းဆုံး အလကားပေးလို့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေးအတွက်ဆိုပြီး အကြောင်းပြကာ ကချင်တွေရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ နားအေးပါးအေးနေလိုမှုတွေကြောင့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် အမည်ခံ သတ်မတော်ဒမြအဖွဲ့က ဒီနေ့အထိအသက်ဆက်နေတာပဲ နိုင်ငံသယံဇာတတွေကို တရားမဝင်တရုတ်နဲ့ နိုင်ငံတကာကို တင်ပို့တာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်တာ
ဒါတွေက သတ်မတော်နဲ့ ပြည်မအာဏာပိုင်တွေရဲ့အလုပ်ပဲ အမြစ်ပြတ်မှ နားအေးရုံတင်မက တိုင်းပြည်လည်း ပြန်တိုးတက်လာမှာ
ဟုတ်ကြပါပြီ ... အားလုံးမှန်တယ်
ငါပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်စစ်ဖြစ်လိုက်ပါတော့
ဗုဒ္ဓံ စောရတီတိ ဗောမော ။ ဗုဒ္ဓံ ဘုရားကို ။ စောရတိ ခေါ
တတ်သော။ ၏တိသတ္တမာ ထိုကြောင့်။ ဗောမော ဗမာ
ကေအိုင်အေ က တရုပ်ကို ခိုးရောင်းတယ်ပဲ ထားပါတော့
သူပိုင်တဲ့ နယ်မြေထဲက အရာ သူလုပ်တာဘဲ- ဗမာစစ်တပ်က ဗမာပြည်ထဲကရော-ဗမာပြည်ထဲက မဟုတ်တာရော တရုပ်ကို ရောင်းစားနေတာဟဲ့-ဗမာပြည်ထဲက မရှိဆင်းရဲသား လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်မြေတွေသိမ်းပြီး-ခင်ရွှေတို့ လို ခေတ်ပျက်သေဌေးတွေရောင်းစား-ရခိုင်က ဓါတ်ငွေ့ တွေ ရောင်းစား-တနင်္သာရီက ရတနာဓါတ်ငွေ့ တွေရောင်းစား-ဒေါ်လာတွေ ဘယ်လောက်ရတုန်းသိကြလို့ လား။ ခိုးယုံတင် အားမရဘူး- ဘုရားပြပြီး အလှူခံစားလိုက်သေးတယ်။ ငါ ဗမာတယောက်ဘဲ- တိုင်းရင်းသားဆိုးတယ်တာ အပြစ်မပြောနဲ့ကိုယ့်တပ်ကို ကိုပြန်ကြည့်ဦး-အခု ကေအိုင်အေ ထံမှာ စစ်သုံပန်း ၃၀လောက် ဂဂ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဗမာအစိုးရ ကို လက်ခံဘို့ ပြောရဦးမယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာ သူ့ တပ်က လူတောင် ထည့်တွက်တာမဟုတ်ဘူး။ သာမန် အရပ်သားဆို ပြောမနေနဲ့လေကုန်ယုံဘဲရှိမယ်။ လှည့်တောင် ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ တခုဘဲမေးလိုက်မယ် စစ်ဦးချုပ်ကြီးရဲ့သမီးတော် မင်္ဂလာပွဲ အတွက် ရတဲ့ငွေကို ဘယ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်ပေးကမ်းစွန့် ကျဲတယ်ကြားဘူးလဲ-- ပြောမယ်ဆို ပြောစရာတွေ အများကြီး-ကိုယ့်ပေါင်ကို လှန်ထောင်သလိုဖြစ်မယ်-
Elite Regimes said...
ရွာလယ်က အာကျယ် ပြောတာ မှန်တယ်ဗျို့ ။ ကျနော်လဲ စစ်သားသမီးတယောက်ပဲ ဒါတွေကို မမြင်ချင်အဆုံး အသဲနာအောင် မြင်တွေ့ခဲ့ရကြားခဲ့ရပြီးပြီ။ မသိတဲ့လူများကတော့ တပ်မတော်ဆိုအသေအလဲ အထင်ကြီးနေကျတာ ဗိုလ်လုပ်ပြီး ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြားမှာ ဂုဏ်ယူ၀၀င့်ကြွားစွာနေရမလားအောင်းမေ့တယ် ၀င်ကြည့်မှ စစ်သားဆိုတာ အလွန်တရာမှ အကျင့်ပျက် အောက်တန်းကျတဲ့ သတ၀ါတွေမှန်းသိရတော့တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးသော စစ်သားကောင်းမှန်တမျှ သေသော်နတ်ပြည်လားပါစေဗျာ။
ရွာလယ်ကအာကျယ်ရေ့ မင်းကတိုင်းရင်းသားလား အမုန်းနဲ့ဒေါသ မနှိုးဆွကောင်း ဗမာမုန်းတယ် စစ်သားမုန်းတယ် ဟိုမုန်းတယ် ဒီမုန်းတယ် မလုပ်သင့် အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အတိုင်း သဘာဝကျကျ လူပီပီ လူလို စဉ်းစားကြတာပေါ့ ဆွေးနွေးကြတာ ပေါ့ မင်းတို့ ငါတို့ ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ အမုန်းတရားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာမှာ စိတ်မပူဘူးလား မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်မှာ စိတ်မပူဘူးလား ဘယ်လိုစကားမျိုး က စိတ်ဝမ်းကွဲစေပြီး နိုင်ငံအတွင်းမှာ နှစ်ရှည်လများ သတ်ဖြတ်မှုတွေ တိုက် ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်သင့်တာပေါ့ ကုန်ကုန် ပြောရရင် တနိုင်ငံလုံးပြာဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ် တွေကြည့်သင့်တာလေးပါ ဘဝနောင်ရေး စိတ်မအေးချင်ဘူးလား
ဆရာလွဏ်းဆွေ ဘာများဖြစ်နေတုံး သတင်း နဲ့ နယူးပိုစ့်တွေ ထပ်မတင်သေးပါလား။
Government and Ka Chin are still stupid. Now the Fox China taking from very valuable things from our country with cheapest price and let the whole country die.
Please both side think about it.
Doctor လေဖြတ်ပြီးဆေးရုံရောက်နေသည်. စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်
Before Saya back, see: http://boburmese.blogspot.com/
ထင်တော့ထင်သား.. ဒီလူကြီး နေမကောင်းဖြစ်လို့နဲ့တူတယ်လို့.. လောကမှာ ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးရင် အရာရာ ဆုံးရှုံးတာပါပဲ.. ဆေးမကုတဲ့ဒေါက်တာကြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးတော့ ကရုစိုက်ပါဗျ..
ကောင်းကောင်းနေကောင်းမှ blog ကိစ္စပြန်စစေချင်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကလည်း မသိမသာနဲ့ ဖိအားကများသားကလား.. ကျနော်ဆို..တစ်ခါတလေ မယ်မယ်ယယ အကြောင်းမရှိဘဲ စိတ်တိုနေတတ်တဲ့အခါ.. အင်တာနက်ထဲက ဖိအားတွေ ကိုယ့်အလုပ်ထဲ ဘ၀ထဲအထိ ၀င်ရောက် ချယ်လှယ်ခံနေရလားဆိုပြီး သတိထားရတယ်..။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ အမြန်နေကောင်းဖို့ မေတ္တာပို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Dr လွမ်းဆွေ အရူးထောင်ရောက်နေပါသည်။
natthar lay said...
black burma ရေ ငါ့ဒို့ကမင်းဒို့ကို ညီအစ်ကိုလိုချစ်ပါသည် ငါ့ဒိုကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ ကြင်နာတက်တဲ့နှလုံးသားအပြည့်ရှိပါတယ် မင်းဒို့ဘာဖြစ်လို့မတရားသဖြင့်လုပ်ချင်နေတာလဲ မင်းဒို့က 'ဘိန်း' နဲ့ ကင်းလို့လား မင်းဒို့ အလုပ်တွေပေါ် မှာစိုးလို့လား
KIAကို လုံးခင်းဘက်မှာ ကျည်ဆံမှောင်ခိုလာရောင်းနေတဲ့အကောင်တွေရှိတယ်။ အဲဒီအကောင်တွေကိုရအာင် ရှင်းပစ်စေလိုပါတယ်။ ကေအိုင်အေ(တပ်ရင်း၆)ဟာ ဖားကန်.-လုံးခင်းဘက်မှာ ရေမဆေးကျောက်ရှာတဲ့သူအယောင်ဆောင်ပြိး ကုပ္မဏီလုပ်ကွက်တွေထဲက ဆီတိုင်ကီတွေ ကိုဖေါက်ပြိးလုယူတယ် နောက်ပြိး ဘက်ဖိုး(မြေတူးစက်)တွေကို သူ.လူနဲံ.သူဇွတ်မောင်းယူသွားပြိး လုပ်ကွက်တွေထဲက ကျောက်စိမ်းတွေကို တူးဖေါ်ယူပြိးတော့ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ. မိသားစုစထောက်ပံ့ပါတယ်။ မန္တလေးစတဲ့မြို.တွေမှာ တိုက်တွေကားတွေ ၀ယ်ထားကြပါတယ်။ တချို.ငွေကိုတော့ လက်နက်မှောင်ခို လာရောင်းတဲ့သူတွေဆီက ကျည်ဆံတွေဝယ်ပြိး ပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်နေကြပါတယ်။ ကေအိုင်အေကိုလုံးဝရှင်းသွားအောင် တိုက်ခိုက်ခြေမှုန်းသင့်ပါတယ်။ တနိုင်းဘက်မှာလည်း နယ်မြေခံရှမ်းနီမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ရှမ်းသမိုင်းပျောက်အောင် ရှေးဟောင်းရှမ်းဘုရားတွေကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပြစ်ပါတယ်။ တနိုင်းနယ်မှာ ရှမ်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းသက်သေပြချင်လို. ရှမ်းဘုရာတွေကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆိးပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ KI0/KIAကချင်တွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှမ်းသမိုင်းရော ရှမ်းနီမျိုးနွယ်စုတွေကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင် စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၁.၁၂.၂၀၁၂နေ.ကမိုင်းခွဲခံရသော ကုန်ရထားသည် KIA/KI0ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်ပြောသကဲ့သို. စစ်လက်နက်များတင်ဆောင်လာသော စစ်ရထားလုံးဝ မဟုတ်ပါ။
ရထားမိုင်းခွဲခံရတဲ့သတင်းကို ဒေါက်တာလွမ်းဆွေထဲမှာရေးထားတာကတော့ KIA/KI0ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥိးလနန်က စစ်လက်နက်တွေ တင်ထားတဲ့ ရထားမို. မခွဲမဖြစ် ခွဲရတာပါ ပြောထားလို. တင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲ သေသေချာချာကြည့်တော့ ရထားတွဲမှောက်ပြိး ပေါက်နေတဲ့ ဒေါင့်နေရာဖြူဖြူတွေတွေ.ရပါတယ်။ မြန်မာ့မိးထားကနေပြိး မိးရထားကုန်တွဲငှားရန်းပြိး ပို.ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ ကုန်သည်အဖွဲ.များထံ စုံစမ်းကြည့်တော့ ရထားအမှတ်စဉ်၉၃၇ စက်ခေါင်းအမှတ်( DD-1137 )ဟာ တွဲဆိုင်း ၁၀ဆိုင်းလောက်ပါတဲ့ ကုန်ရထားဖြစ်နေတယ်။ ပေါက်နေတဲ့ တွဲက ထုံးတင်ထားတယ်လို.သိရပါတယ်။ တရုပ်ရထားတွဲ(သို.)auto တွဲလို.လဲခေါ်ပါတယ်။ တစ်တွဲလျှင် တန်၃၀တင်နိုင်ပြိး အလုံပိတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် ကုန်သည်များမှ အပျက်အစည်းနဲသဖြင့် အတင်များသော ကုန်တွဲမျိုးဖြစ်ပါသည်။တွဲဆိုင်းငှားသူက မိးရထားဋ္ဌာနကို စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း၂၅၀ မှ၃၀၀ကျပ်အထိ ပေးငှားရသောတွဲမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သည်တွေက တွဲဆိုင်းလိုက်စုပေါင်း ငှားရန်းအသုံးပြုကြပါသည်။၄င်းကုန်ရထားမျိုး(၇)ဆိုင်း ရှိပြိး တွဲနံပါတ်၄၀(လေးသုံည)မှစသောတွဲများဖြစ်ပြိး ။၄င်းတွဲများတွင် စားသောက်ကုန်များ ဆန်၊ခရမ်းချဉ်သိး၊ကြက်သွန်၊အချိုရည် စသောစားသောက်ကုန်များ ထုံးဘိလပ်မြေများတင်လေ. ရှိကြပါတယ်။ ယခုတွဲဆိုင်းတွင်ထုံးများ ၊ပါခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ်။ ၄င်းတွဲဆိုင်းအမျိုးအစားများကို ပြိးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ စတင်သုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ်။ ယခုအခေါက်တင်တဲ့ ကုန်သည်တွေကို စုံစမ်းကြည့်တော့ မြစ်ကြိးနားမြို.k kကုန်စုံဆိုင်၊ ကုလားကိုအရှုပ်၊ကိုမနားတို. ပါဝင်ကြသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။KIA/KIO သောင်းကျန်းသူ ကိုယ်စားလှယ်ဦးလနန်ပြောသလို စစ်လက်နက်တင်ရထားလုံးဝ မဟုတ်ပါ။ပြည်သူလူထုစားသောက်ကုန်များသာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်ချစ်လွန်းလှသဖြင့် အစိုးရကို ကျီးကန်းကဲ့သို. ၀ိုင်းအာနေကြသော မျိုးချစ်မီဒီယာသမားများ၊ ၈၈မျိုးဆက်သစ်များ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ ။ ဒေါ်ဒွဲဘူတို.နှင်. အတူလွှတ်တော် တက်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို အင်မတန်လိုလား တောင့်တနေကြသောလတ်ွှတော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများမှ KI0/KIA၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် အဖြစ်မှန်များကို ဖေါ်ထုပ်ပေးစေလို ပါသည်။